Warar Cusub oo kasoo baxaya Weerarkii Westgate // Wiil Haysta Dhalashada Norway.. | KEYDMEDIA ONLINE
Warar Cusub oo kasoo baxaya Weerarkii Westgate // Wiil Haysta Dhalashada Norway..
Nairobi (KON) - Wiil Asal ahaan u dhashay Soomaaliya, laakiin heystay Baasaboorka Dalka Norway ayaa kamid ahaa Raggii Weeraray Xarunta ganacsiga Westgate ee magaalada Nairobi, Warkaas waxaa Xaqiijiyay Booliska Norway.
Wiilkaan oo lagu magacaabo Xasan Cabdi Dhuxulow ayaa la sheegay in uu kamid ahaa (Afartii!!) Nin ee Weerarka ku qaaday bishii hore Suuqa laga dukaamaysto ee Westgate ee Nairobi.
Xasan oo 23 jir ah, ayaa Afar Sano kamid ahaa Argagixisada Kooxda Al-Shabaab, sidaas waxaa sheegay Booliska Norway.
Ciidamada Booliska dalka Norway ayaa BBC-da u sheegay in Ninkaan uu ku jiray kooxdii weerarka ku qaaday xarunta ganacsiga Westgate ee magaalada Nairobi, kuwaasi oo laga daawaday kaamarayaasha dhismaha Westage, iyaga oo weerarka fulinaya.
Dhuxulow oo Dalka Norway ka degnaa Magaalada Larfik ayaa sida la sheegay Sanadkii 2009 ka tagay Dalkaasi, waxaana la filayaa in 2009 uu ku biiray Argagixisada.
Qoyska Xasan ayaa Sanadkii 1999 u soo safray Dalka Norway, ayagoo Qaxooti ahaan isig dhiibay Dalkaasi.
Kaamirda qarsoon ee ku xiran Dukaanka ayaa soo bandhigtay Afar Qof oo ka mid ahaa dhuxulow oo xiligaasi watay jaakad madaw ah.
Bishii hore ayay Koox hubeeysan oo al-Shabaab ah waxa ay xoog ku galeen Suuq heerkiisu sarreeyo ee laga dukaameeysto, waxa ay si aan kala sooc lahayn rasaas ugu fureen dadkii adeeganayay iyagoo sidoo kalena bam-gacmeed ku tuurayay dad tira badan oo rayid ah oo aan waxba galabsan. Kadib is horfadhi socday afar maalmood, ayay raggii hubeeysnaa waxa ay dileen ugu yaraan 72 qof iyaga oo tiro aan la garanayn oo dad ahna u qabsaday la haysta ahaan illaa iyo intii ciidamada ammaanka Kenya ay xaaladda gacanta ku dhigeen.
Laakiin Weerarka kadib, ayaa wali su’aalo badan wax jawaab ah loo hayn: Maxaa ku dhacay la haystayaashii kale? Sidee bay ugu suuroowday weeraryahannadu in ay soo galaan xarunta suuqa oo ay u haysteen muddada intaa dherer le’eg? Yaa soo maleegay oo ka dambeeyay weerarka xaggee buuse jiraa qofkaa hadda?
Wararka iskhilaafsan oo ka soo baxaya Mas'uuliyiinta Kenya ayaa sababay Jahwareer iyo dhalleeceeyn ay ku mutaysteen Awoodda ay u leeyihiin xakamaynta xaalka.